महाभारत: धनिहरुलाई जहिले पनि यस्ता कुराका डर हुन्छन् ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com महाभारत: धनिहरुलाई जहिले पनि यस्ता कुराका डर हुन्छन् ! - खबर प्रवाह
महाभारत एक धार्मिक ग्रन्थ मात्र होइन जीवन बारे अनेक पाठ पढाउने महाकाब्य हो।
महाभारतका पात्रहरूद्वारा गरिएको गल्तीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। महाभारतका पात्रहरुले गरेका गल्ती र त्यसको परिणामबाट धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ। ईर्ष्या, द्वेष, लालच र सत्ताका कारण के सम्म हुन्छ भन्ने कुरा महाभारतबाट ज्ञान लिन सकिन्छ। सत्ता तथा शक्तिका लागि आफ्नै नजिकका मानिसहरु पनि कसरी शत्रुमा परिणत हुन पुग्छन् भन्ने पाठ महाभारत बाहेक अन्त कुनै ग्रन्थमा पाइन्छ।
महाभारत ग्रन्थ अन्तर्गतको श्रीमद्भगवद गीतामा मानव जीवन, दायित्व र धर्म बारे अनेक तथ्यहरु उल्लेख गरिएको छ। कलियुगको आरम्भमा कुरुक्षेत्र नामको युद्ध भूमिमा अर्जुनलाई कृष्णले दिएको गीताको उपदेश अहिलेको समयमा पनि त्यतिकै प्रभावकारी छन्। महाभारत र गीतालाई मान्ने हो भने धनि व्यक्तिहरुलाई अनेक तनाब हुन्छन्। गरिबलाई भन्दा बढी एक धनि व्यक्तिलाई मानसिक रुपमा अनेक तनाब हुने पाठ महाभारतले सिकाउने पाठ मध्ये एक हो।
मानसिक असन्तुष्टि: जति नै धन भएपनि धनि मानिसहरु सधैँ चिन्तित रहन्छन्। अझ गलत तरिकाबाट धन आर्जन गर्नेहरु झनै बढी मानसिक रुपमा असन्तुष्ट हुन्छन्। अनेक भौतिक सुख पाउँदा पनि उनीहरु खुसि र सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। धन चोरी हुने हो की, धन कसैलाई दिनुपर्ने हो की जस्ता कुराले उनीहरुलाई सताइरहन्छ। महाभारत ग्रन्थमा अनुसार धनि व्यक्तिहरुलाई निम्न कुराका डर हुन्छन्।
राज्य देखि भय: पहिला-पहिला राजाको बोलि र निर्णयनै सबै कुरा हुन्थ्यो। धनि व्यक्तिहरुलाई त्यति बेला राजाले आफ्नो सम्पति जफत पो गर्ने हुन् की भन्ने कुराले सताउने गर्थ्यो। साथै उनीहरु राज्यले लगाउने कर तथा राजस्वलाई लिएर पनि चिन्तित हुन्थे। अहिले राजा त छैनन्। तर, धनि व्यक्तिहरुलाई सधैँ कर र राजस्वको चिन्ता हुन्छ। जस कारण उनीहरु सधैँ कर चल्ने प्रयासमा हुन्छन्।
आगोको डर: आगोको एक झिल्कोले कति सम्म बिनास गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। एक झिल्को एक वस्तीनै सखाप पार्ने क्षमता राख्छ। जसकारण धनि व्यक्तिहरुलाई आगोको ठूलो डर हुन्छ।
आफन्त: धनि व्यक्तिहरु आफन्त देखि धेरै डराउँछन्। उनीहरु आफ्नो बर्बादीको कारण आफन्त बन्न सक्ने भन्दा सके सम्म आफन्तजनबाट टाढा रहन रुचाउँछन्। अझ आफ्नो हैसियत नमिल्ने आफन्तसंग आउजाउ समेत बन्द गर्न सक्छन्।
(माथि उल्लेखित तीन डर बारे महाभारत ग्रन्थमा प्रष्ट बनाइएको छ। अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने पनि ती कारणहरु तथ्यपरक हुन आउँछन्।)
अब गठबन्धनको ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ : विष्णु पौडेल